B&B Il Ceraseto - "Bianca" igumbi
I-B&B ikwi-Regional Park ye-Abbey yaseMonteveglio kwindawo yepanoramic kwi-ledge encinci, malunga ne-30 km. ukusuka eBologna, kwaye inika amagumbi okulala ama-3 / amagumbi okuhlambela. Indawo izele ngamathuba endalo, i-gastronomic, inkcubeko.
Indawo engaphakathi kwepaki, kwindawo ekhuselweyo, iya kukuvumela ukuba ujabulele indalo ejikelezileyo (amahlathi, amasimi, izidiliya kunye ne-calanchi). Inxalenye yendlu esetyenziswa njenge-B&B inamagumbi okulala amathathu abanzi, ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala elineshawa enkulu kunye nefestile ngaphandle; iindawo eziqhelekileyo zenziwe ngegumbi lesidlo sakusasa kunye negumbi lokuhlala elinesofa, indawo yomlilo kunye nesitulo esiphezulu sabantwana abancinci, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nesitovu, i-microwave kunye nefriji, iluncedo ngakumbi kwiintsapho ezinabantwana; ukusuka ekhitshini kukhokelela kwindawo enkulu yophahla apho, ehlotyeni, unokonwabela isidlo sakusasa ngaphandle. Kwiindwendwe ezikhethayo, ungazilungiselela isidlo sakusasa ngaphandle kwemiqobo yexesha kwaye usebenzise ukutya okutsha okukhoyo. I-BACKFIST AYIBANDISWA KWIXABISO.
Indawo izele ngamathuba endalo, i-gastronomic, inkcubeko. Kukho izinto ezininzi ezinokwenzeka zeendawo zokutyela ezibalaseleyo ezikufutshane.
UMarilena noStefano bahlala kwinxalenye yendlu ende, enomnyango owahlukileyo kuleyo ye-B&B kwaye bayafumaneka ngeengcebiso, iingcebiso. I-B&B ayifikeleleki ngokuthe ngqo ngezithuthi zikawonke-wonke, kodwa, kumgama oziikhilomitha ezi-5, ime kwisikhululo sikaloliwe eBologna - Vignola; ukuba kuyimfuneko sinokubonelela ngenkonzo yothutho.
UMarilena noStefano bahlala kwinxalenye yendlu ende, enomnyango owahlukileyo kuleyo ye-B&B kwaye bayafumaneka ngeengcebiso, iingcebiso. I-B&B ayifikeleleki ngokuthe ngqo ngezithuth…